भ्याट फिर्ताको विवाद | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय भ्याट फिर्ताको विवाद
सम्पादकीय 278 views
भ्याट फिर्ताको विवाद
सरकारले व्यवसायीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को रकम फिर्ता गर्ने प्रणालीको विरोध हाल निकै चर्किएको छ । हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत भ्याटको सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत भ्याट फिर्ता भएको भन्ने टिप्पणी गरिएको छ र यसले धेरैको विचारमा समग्र अर्थतन्त्र नै डुब्न लागेको सन्देश दिएको छ । तर, भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गर्नुको कारण नै नबुझी या बुझ पचाएर त्यस्तो टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । भ्याट फिर्ता भन्नेबित्तिकै दुईओटा पाटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो हो, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसारको भ्याट फिर्ता । दोस्रो, विभिन्न कर पछ्र्योट आयोगले गरेको भ्याट छूट, मिनाहा वा फिर्ता । यी दुवै खालको भ्याट फिर्ताको प्रकृति फरक भएकाले यसलाई अलगअलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्याट ऐनले दिएको व्यवस्थाअनुसार भ्याट फिर्ता अवैध होइन, जहिले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरियो, अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै पुग्न सक्ने देखेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात् खास वस्तु वा सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने अत्यावश्यक केही वस्तुका व्यवसायमा व्यवसायीलाई टिकाइराख्न तथा खास व्यवसायलाई औपचारिक रूपमा भ्याट प्रणालीमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्नेजस्ता ध्येयले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्थामा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको तथा उठाएको हिसाब राख्छन्, उठाएको भ्याट तिर्छन् र पछि सरकारले भ्याटबिलसहित दाबी गरेअनुसारको भ्याट रकम उनीहरूलाई फिर्ता गर्छ । यसो गर्दा एक त करको दायरा फराकिलो हुन्छ र धेरैभन्दा धेरै कारोबार भ्याटमा दर्ता हुन्छन् । यस्तो रकम फिर्ता गर्दा सरकारलाई आर्थिक रूपले केही बोझ परेको देखिए पनि समग्र आर्थिक प्रणालीलाई औपचारिक प्रणालीमा सामेल गर्न सकिन्छ । अर्को, भ्याट फिर्ताले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ । उखु र मैदामा भ्याट फिर्ता गर्दा उद्योग र किसान दुवै लाभान्वित भएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । त्यस्तै निर्यात गरिएका वस्तुको भ्याट फिर्ताले निर्यातलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । अतः भ्याट ऐनअनुसार फिर्ता भएको भ्याटमा त्यति विवाद गर्नु उपयुक्त देखिन्न । हो, जुन वस्तु र सेवामा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ, तिनमा समयसापेक्ष मूल्याङ्कन भने गर्नुपर्छ । मोबाइल फोन व्यवसायीलाई भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गर्दा त्यति बेलाको अवैध आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुगेको थियो । तर, त्यही नाममा अब विलासी प्रयाजनका मोबाइललाई पनि त्यही सुविधा दिनुपर्छ भन्नेचाहिँ छैन ।
करको दायरा फराकिलो पार्न तथा व्यवसायलाई
औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न छूटभन्दा फिर्ताको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ ।
कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार गठन गरिएको पछिल्लो कर फछ्र्योट आयोगले भ्याट छूट वा फिर्ताको माग नै नगरेका करदातालाई समेत भ्याट फिर्ता गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यसअघिका आयोगले पनि यस्तै अनुचित काम गरेका हुन सक्छन् । त्यसको भने सोधीखोजी भएको देखि“दैन । यसरी विद्यमान ऐननियमविपरीत गएर दिइएको भ्याट छूटको औचित्य देखिन्न । त्यति मात्र होइन, यसले भ्याट र आयकर छल्नसमेत व्यवसायीलाई प्रेरित गर्न सक्छ । करको दायरालाई खुम्च्याई भ्याटमा दर्ता नहुनसमेत हौसला मिल्न सक्छ । त्यसैले यस्तो प्रक्रियामा भने लगाम लगाउन पछि पर्नु हुन्न । कुन प्रयोजनका लागि भ्याट फिर्ता दिइएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा भएको छैन वा दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा संसद्बाट कानून पारित गराई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, विद्यमान ऐन र नियमअनुसार भएका कामलाई अवैध वा गलत भनिहाल्नुचाहिँ सिद्धान्ततः गलत हुन्छ ।
अहिले कतिपयले भ्याट फिर्तालाई भ्याटको सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत पनि भनेका छन् । श्वेतपत्रमा समेत यसरी भ्याट फिर्ता गलत हो भन्ने आशय व्यक्त भएको पाइन्छ । तर, संसारभर जहाँजहाँ भ्याट लागू भएको छ त्यहाँ विभिन्न वस्तु र सेवामा यस्तो छूटको व्यवस्था छ । भ्याट छूट र फिर्ता फरक विषय हुन् । सकेसम्म कम वस्तु र सेवामा भ्याट छूटको व्यवस्था हुनुपर्छ । भ्याट छूट हुँदा व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हु“दैन । तर, करको दायरा फराकिलो पार्न तथा व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न छूटभन्दा फिर्ताको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । २० लाखभन्दा बढीको कारोबार भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेमा अहिले त्यो प्रावधान ५० लाख पुर्‍याइएको छ । खासमा भन्ने हो भने २० लाखबाट घटाएर १० लाखमा झार्दै क्रमशः सबै कारोबार भ्याटमा दर्ता गरिनु उपयुक्त हुन्छ । हुन त साना व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गराउँदा प्रशासनिक झमेला र खर्च बढ्ने भन्दै त्यसलाई कर प्रशासनले त्यति चासो नदिएको पाइन्छ । तर, अहिलेको भ्याटको ‘थ्रेसहोल्ड’ले नै त्यस्तो प्रशासनिक झन्झट बढाइरहेको तथ्य बिर्सन हुन्न । ५० लाखको थ्रेसहोल्ड राखेका कारण व्यवसायीहरूले ३/४ ओटा अलगअलग कम्पनी दर्ता गरेर प्रत्येकको कारोबार ५० लाभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्छन् । यसरी तीनओटा कम्पनीले गरी डेढ करोडसम्मको कारोबार भ्याटमा दर्ता नभई गर्न पाइयो । कर कार्यालयले आयकर प्रयोजनका लागि तीनओटा फाइल बनाउनुप¥यो । यो चाहिँ भ्याटको कुन सिद्धान्तसम्मत होला ? बुझ्न सकिएको छैन ।
Vat अर्थात् मूल्य अभिव्रिध्दि करत् जनताले तिरेको कर हैनर ? अनि यो किन व्यापारीहरुलाई फिर्ता गर्ने ? प्रस्ट पारिदिनु भए हुन्थ्यो कि ?
एण्टी डम्पिङ कानूनमा सावधानी